पोखरामा बजार बढाउँदै भायनेट, अफरबाट ग्राहक आकर्षित – Arthik Awaj
पोखरामा बजार बढाउँदै भायनेट, अफरबाट ग्राहक आकर्षित
By आर्थिक आवाज २०७५ फाल्गुन १ गते बुधबार ०६:१५ मा प्रकाशित
पोखरा, १ फागुन । नेपालको अग्रणी इन्टरनेट तथा टि.भी. सेवा प्रदायक भायनेट कम्युनिकेसन्स प्रा. लि.ले पोखरामा बजार विस्तारलाई तिब्रता दिएको छ । प्रालिले पोखरा शाखा स्थापनाको दुई महिना नपुग्दै २ सय ७० भन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्न सफल भएको छ ।
पोखरा आएको छोटो समयमा ग्राहकको विश्वास जित्न सफल भएको शाखा प्रवन्धक कृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । २० एमबिपिएसदेखि ६० एमविपिएसको नेट जोड्ने काम भइरहेको उनले बताए । ‘कार्यालय प्रयोजनका लागि कर्पोरेट प्याकेजबाट भायानेटलाई जोड्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । २० भन्दा बढी कार्यालयमा कर्पोरेट प्याकेजको भायानेट जडान भइसकेको उनले बताए ।
भायानेटले पोखरा क्षेत्रका ग्राहकलाई विशेष अफरमा सेवा प्रदान गरिरहेको सुवेदीले आर्थिक आवाजलाई जानकारी दिए । ३ महिनाको प्याकेजमा नेट जोड्न थप दुई महिना बोनस अफर र एक वर्षको प्याकेजमा नेट जोड्दा थप ४ महिना बोनस अफर पोखरा क्षेत्रका ग्राहकलाई प्रदान गरिएको उनले बताए । ‘अफरले पनि ग्राहकलाई भायनेटप्रति आकर्षित गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सेवा लिन चाहने ग्राहकको चाहना बढ्दो छ ।’
भायनेटले पोखरामा टेलिकम्युनिकेसन प्रविधिमा नाम कहलिएको नोकियासंगको सहकार्यमा आफ्नो ‘अल्ट्रा ब्रोडब्यान्ड’ क्षमतायुक्त नेटवर्कको शुरुवात गरेको छ । ‘अल्ट्रा ब्रोडब्यान्ड’ले सय एमविपिएस भन्दा बढीको स्पीड प्रदान गर्नसक्छ ।
बिगत १९ वर्षदेखि भायनेट कम्युनिकेसन्स सधैं नै अग्रणी रहि प्रयोगकर्ताहरुलाई भरपर्दो र सुलभ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सर्भिस प्रदान गर्दै आइरहेको प्रालिले जनाएको छ । भायानेटले पोखरामा टिभीसमेत जडान गर्दै आइरहेको छ । ५५ भन्दा बढी एचडी च्यानलहरु सहित कुल १ सय ९० च्यानलहरु हेर्न मिल्छ र अन्य सुविधाहरु जस्तै पज एन्ड प्ले, मुभिज अन डिमान्ड, एक हप्ता सम्मको अटो रेकर्डिङ सुविधा छ । जसले प्रयोगकर्ताहरुले आफूले हेर्न नपाएको एपिसोड रिवाइन्ड गरेर हेर्न सक्नेछन् । टि.भी. एनिह्वेर सुविधाले प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो मोबाइल र ल्यापटपमा पनि टि.भी. च्यानलहरु हेर्न सक्ने सुवेदीले जानकारी दिए । वर्षको हरेक दिन २४सै घण्टा सेवा दिने कम्पनीले जनाएको छ ।